အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ အသက် ၇၀ ဆရာမကြီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ် - CeleTrend
အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ အသက် ၇၀ ဆရာမကြီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
December 3, 2019 Celebrity ကြားသိရသမျှ 0
အထက ၁၂ အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာ အသက် ၇၀ ဆရာမကြီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်ကျအောင် လုပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အနန္တောအနန္တငါးပါးကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…အနန္တောအနန္တ ငါးပါးထဲမှာ တစ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ဆရာတွေကိုလည်း ကန်တော့ကြတဲ့ အစဉ်အလာဟာ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ငယ်စဉ်ဘဝက မိမိကို ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမတွေကို မိမိတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ စုပေါင်းပြီးတော့ ဆရာကန်တော့ပွဲတွေ ကျင်းပ….
ဆရာတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြန်ဆုံကြတဲ့ ဓလေ့ဟာ အလွန်ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပါ…ဒီလို ကုသိုလ်ယူကြတဲ့ ပွဲမှာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ယုတ်မာမှုကြောင့် စိတ်မကောင်းစရာတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်…ဒီအကြောင်းလေးကို ဆရာကန်တော့ပွဲတစ်ခုမှာ ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့သူတစ်ဦးက ခုလို ပြောပြထားပါတယ်
“မနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်သောမှတ်၁၂ အထက၏အာစရိယပူဇော်ပွဲမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးပါ နောင်အလားတူမျိုးမဖြစ်အောင်တားမြစ်နိုင်ဖို့တင်ပြခြင်းပါ ဆရာများကိုကန်တော့သည့်အခါဘယ်သူကျောင်းသားဟောင်းဟုတ်မဟုတ် မသိနိုင်ပါ ကန်တော့ခံဆရာများကိုလိုက်ပို့သည့်သူများလည်းပါနိုင်တယ်မဟုတ်လား ကျောင်းသားများသည်ဆရာများကို ဖေးမကူညီတွဲ၍လိုက်ပို့ကြသည့်မြင်ကွင်းများမှာပီတိဖြစ်စရာပါ၊ ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာကျမတို့၁၇ ကြိမ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့ ဒါပေမဲ့ မနေ့မှာဆရာမကြီးများ
အဲ့နောက်ကန်တော့ပစ္စည်းအိတ်နဲ့ဆရာမကြီးဖုန်းထည့်ထားသောပိုက်ဆံအိတ်တို့ကိုကိုင်ပေးထားသလိုနဲ့ ကျောင်းပြင်ကိုထွက်သွားတယ် ဆရာမကြီးကလည်းပြန်လာနိုးစောင့်နေယ်ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးပြန်မလာတော့ပါ…အဲဒီမှကျောင်းသား/သူတိုနဲ့ရောပြီးအလစ်သုတ်သွားမှန်းသိရသောဆရာမကြီးငိုပါလေတော့သည်..အသက် ၇၀ ကျော်ဆရာမကြီးကိုလုပ်ရက်တယ်…အထက ၁၂ ကျောင်းသား/သူများမှဆရာမကြီး ကိုစိတ်ချမ်းသာစေရန်ဝိုင်းဝန်း၍ စုပေါင်းလှူကြပြီး အလှူတစ်ခုထပ်ပြုကြရပါကြောင်းဆရာကန်တော့ပွဲလုပ်လျင် အလစ်သုတ်များကိုသတိထားနိုင်ပါရန် ဤအဖြစ်မှန်တင်ပြအပ်ပါတယ်…”
တကယ့်ကို သူများတွေ မင်္ဂလာယူနေတဲ့ အချိန်မှာ ယုတ်မာတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ရက်သူတစ်ဦးပါပဲ…ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ယခုလို ဆရာကန်တော့ပွဲတွေ တက်ဖြစ်ရင် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ရှောင်နိုင် သတိထားနိုင်ဖို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ရပါတယ်နော်..
Source : Su Hnin Hlaing
အထက ၁၂ အာစရိယပူဇျောပှဲမှာ အသကျ ၇၀ ဆရာမကွီး ကို ကူညီသလိုလိုနဲ့ မကျြရညျကအြောငျ လုပျသှားတဲ့ ဖွဈရပျ
မွနျမာလူမြိုးတှဟော အနန်တောအနန်တငါးပါးကို ရိုသကေိုငျးရှိုငျးကွသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ…အနန်တောအနန်တ ငါးပါးထဲမှာ တဈပါးအပါအဝငျဖွဈတဲ့ ဆရာတှကေိုလညျး ကနျတော့ကွတဲ့ အစဉျအလာဟာ ကနြျောတို့ မွနျမာလူမြိုးတှမှော ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ဓလပေဲ့ ဖွဈပါတယျ…ငယျစဉျဘဝက မိမိကို ပညာသငျပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ ဆရာမတှကေို မိမိတို့ ကွီးပွငျးလာတဲ့အခါ စုပေါငျးပွီးတော့ ဆရာကနျတော့ပှဲတှေ ကငျြးပ….
ဆရာတှေ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပွနျဆုံကွတဲ့ ဓလဟေ့ာ အလှနျခဈြဖို့ ကောငျးတာပါ…ဒီလို ကုသိုလျယူကွတဲ့ ပှဲမှာ တဈစုံတဈယောကျရဲ့ ယုတျမာမှုကွောငျ့ စိတျမကောငျးစရာတှေ ဖွဈပကျြခဲ့ရပါတယျ…ဒီအကွောငျးလေးကို ဆရာကနျတော့ပှဲတဈခုမှာ ကိုယျတိုငျတကျရောကျခဲ့သူတဈဦးက ခုလို ပွောပွထားပါတယျ…
“မနကေ့ကငျြးပပွုလုပျသောမှတျ၁၂ အထက၏အာစရိယပူဇျောပှဲမှာဖွဈသှားခဲ့တဲ့အဖွဈအပကျြကလေးပါ နောငျအလားတူမြိုးမဖွဈအောငျတားမွဈနိုငျဖို့တငျပွခွငျးပါ ဆရာမြားကိုကနျတော့သညျ့အခါဘယျသူကြောငျးသားဟောငျးဟုတျမဟုတျ မသိနိုငျပါ ကနျတော့ခံဆရာမြားကိုလိုကျပို့သညျ့သူမြားလညျးပါနိုငျတယျမဟုတျလား ကြောငျးသားမြားသညျဆရာမြားကို ဖေးမကူညီတှဲ၍လိုကျပို့ကွသညျ့မွငျကှငျးမြားမှာပီတိဖွဈစရာပါ၊ ဒီလိုပွုလုပျခဲ့သညျမှာကမြတို့၁၇ ကွိမျတိုငျခဲ့ပါပွီ၊ဘာပွဿနာမှမရှိခဲ့ ဒါပမေဲ့ မနမှေ့ာဆရာမကွီးမြား
အဲ့နောကျကနျတော့ပစ်စညျးအိတျနဲ့ဆရာမကွီးဖုနျးထညျ့ထားသောပိုကျဆံအိတျတို့ကိုကိုငျပေးထားသလိုနဲ့ ကြောငျးပွငျကိုထှကျသှားတယျ ဆရာမကွီးကလညျးပွနျလာနိုးစောငျ့နယျေဒါပမေဲ့ထိုအမြိုးသမီးပွနျမလာတော့ပါ…အဲဒီမှကြောငျးသား/သူတိုနဲ့ရောပွီးအလဈသုတျသှားမှနျးသိရသောဆရာမကွီးငိုပါလတေော့သညျ..အသကျ ၇၀ ကြျောဆရာမကွီးကိုလုပျရကျတယျ…အထက ၁၂ ကြောငျးသား/သူမြားမှဆရာမကွီး ကိုစိတျခမျြးသာစရေနျဝိုငျးဝနျး၍ စုပေါငျးလှူကွပွီး အလှူတဈခုထပျပွုကွရပါကွောငျးဆရာကနျတော့ပှဲလုပျလငျြ အလဈသုတျမြားကိုသတိထားနိုငျပါရနျ ဤအဖွဈမှနျတငျပွအပျပါတယျ…”
တကယျ့ကို သူမြားတှေ မင်ျဂလာယူနတေဲ့ အခြိနျမှာ ယုတျမာတဲ့ စိတျနဲ့ လုပျရကျသူတဈဦးပါပဲ…ပရိသတျကွီးတို့လညျး ယခုလို ဆရာကနျတော့ပှဲတှေ တကျဖွဈရငျ ဒီလိုလူမြိုးတှကေို ရှောငျနိုငျ သတိထားနိုငျဖို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျရပါတယျနျော..
ထာဝရနှောင်ကြိုး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ရုံတင်ဝင်ငွေကို တရားဝင် ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ
” ပြန်တောင်မပြောချင်လောက်တဲ့ အကြောင်းအရာကြောင့် လမ်းခွဲပြတ်စဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မြတ်သူသူရဲ့ အချစ်ရေး “